ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်တက္ကသိုလ်တွင်အန္တရာယ်ရှိသည့်အပြုအမူ (၂၀၁၅) - သင်၏ Brain On Porn
C. Bulota, , ခ Leurentb, , အက်ဖ် Collierc,
Volume ကို 24, Issue 4အောက်တိုဘာလ-ဒီဇင်ဘာလ 2015, စာမျက်နှာများ e78-e83
အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်စေလိုလိုလားလားသို့မဟုတ် unwillingly နှင့်တစ်ဦးထက်ပိုသောသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းအချိန်မတန်မီအသက်အရွယ်မှာအားလုံးနီးပါးအဘယ်သူကို၏အင်တာနက်ကနေတဆင့်အဲဒါကိုထိတွေ့နေကြတယ်, ဆယ်ကျော်သက်အပေါ်တစ်ဦးနေရာအနှံ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုနှင့်အန္တရာယ်အပြုအမူအချို့ကိုပုံစံများအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ရှိပါသလား?
ရှစ်ရာတဆယ်နှစ်လိုင်လီကျောင်းသားများကိုတစ်ဦးကျန်းမာရေးစင်တာမှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေး၏အခါသမယမှာသူတို့ကိုအားပေးပြီးမှတစ်ဦးမေးခွန်းလွှာမှအမည်ဝှက်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် linear Regression စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
နီးပါးလူအပေါငျးတို့နှငျ့အမြိုးသမီး၏ 80% ညစ်ညမ်းထိတွေ့ခဲ့သညျ။ ကနဦးထိတွေ့မှု၏ပျမ်းမျှအသက် 15.2 နှစ်ပေါင်းခဲ့သည်.
တစ်ဦးအချိန်မတန်မီအသက်အရွယ်မှာ exposure တစ်ဦးနုပျိုအသက်အရွယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်ထွက်ရှာအံ့သောငှါနှင့်ပိုပြီးမကြာခဏဆေးခြောက်သုံးစွဲဖို့ကြီးမြတ်သောအကွံနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ထိတွေ့မှုများ၏အသက်အရွယ်အခြားတစ်ဖက်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များ၏အရေအတွက်, စအိုထိုးဖောက်မှု, အရက်သို့မဟုတ်ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှု၏အလေ့အကျင့်, တားဆေးအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌အန္တရာယ်များကိုယူပြီးအပေါ်မည်သည့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဖို့ပေါ်လာပါဘူး။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမကြာခဏကြည့်ရှုနေတဲ့အငယ်အသက်အရွယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်၏ပိုကြီးတဲ့အရေအတွက်, ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်ထွက်ရှာထားတဲ့အကွံ, စအိုထိုးဖောက်မှုများ၏အလေ့အကျင့်တစ်ခုလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၏အောက်ပိုင်းအဆင့်နှင့်မလိုချင်သောကိုယ်ဝန်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်ဖြစ်ပါတယ် , အရက်နှင့်ဆေးခြောက်များမြင့်မားစားသုံးမှု။ နိဂုံးချုပ်မှာတော့အဲဒီတွေ့ရှိချက်အကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်, သူတို့ကမြီးကောင်ပေါက်မှပေးအချက်အလက်များ၏ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်လိင်ပညာရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုဦးဆောင်လမ်းပြသင့်ပါတယ်။
“ ကျောင်းသား ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာ IPN တွေနဲ့ထိတွေ့မှုခံရတယ်၊ အများစုကအွန်လိုင်းမှာ။ ယောက်ျားများသည်အမျိုးသမီးများထက် ၉၈.၇% နှင့် ၇၈.၈% တို့ထက်ထိတွေ့မှုနှုန်းသည်အမျိုးသားများထက်ပိုမိုများပြားသည်။ သို့သော်ယောက်ျားများသည်အစောပိုင်းအရွယ်များ၌ထိတွေ့မှုရှိသည်။ အမျိုးသားများနှင့်စတင်ထိတွေ့လာသည့်ပျမ်းမျှအသက်မှာ ၁၄.၅ ဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးသမီးများအတွက် ၁၅.၈ ဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်နှစ်ခုမှကျောင်းသားတစ် ဦး နီးပါးက၎င်းတို့သည် IPN များနှင့်မလိုလားအပ်သောထိတွေ့မှုရှိသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ကျောင်းသားများ၏လေးပုံတစ်ပုံသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောဆိုဒ်များကိုတစ်လမှ ၁ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ်ကြည့်ပြီး ၉% သောသူတို့သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ထက်မကစားသုံးကြသည်။ ထိတွေ့မှုအကြိမ်ရေသည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားတွင်များစွာကွဲပြားသည်။ 'ပုံမှန်စားသုံးသူများ' နှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားများ၏ ၁၈.၄% နှင့်အမျိုးသမီး ၁.၆% သာသက်ဆိုင်သောဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှင်းလင်းလာသည်။ "
IPN များထိတွေ့မှုအကြိမ်ရေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံမှန်စားသုံးသူများ (တစ်လတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး) နှင့် 'ပုံမှန်ပုံမှန်စားသုံးသူများ' (တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး) ကြားတွင်လေ့လာခဲ့သည်။ အသက်နှင့်သိသိသာသာဆက်စပ်မှုရှိသည်။ လူတစ် ဦး ၏ပထမ ဦး ဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏။ IPN များပုံမှန်သုံးစွဲမှုရှိသောနေရာတွင်၎င်းကို ၃ လမှ ၄ လအထိလျှော့ချသည်။ ၎င်းသည်လိင်ကြင်ဖော်ဖက်များပိုမိုများပြားလာခြင်း၊ ပုံမှန်မိတ်ဖက်များရှာဖွေခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းမခံရသည့်တိုင်အောင်ကွန်ဒုံးသုံးရန်၊ စအိုထိုးဖောက်ရန်လေ့ကျင့်ရန်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်သန္ဓေတားနည်းကိုမကြာခဏပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သည်။
ဒီလေ့လာမှုကမိမိဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်ပြီးအခွင့်ထူးခံလူမှုစီးပွားအလွှာပိုင်သောသူမိသားစုများအနေဖြင့်ကျောင်းသားများအတွက် reserved ဖြစ်ပါတယ်တက်ရောက်သူရာ၏, မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများဖွင့်လုပ်မယ့်တက္ကသိုလ်ပတ်ဝန်းကျင်၌ပြစ်မှားမိခဲ့သည်။ တစ်ရွေးချယ်ရေးဘက်လိုက်မှုဖြစ်ကောင်း, ဤကိစ္စတွင်အတွက်ထို့ကြောင့်ရှိပါသည်။ သို့သော်ဤအလုပ်၏ရလဒ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းတွေ့ရှိချက်ငယ်ရွယ်လူကြီးများ၏အမူအကျင့်များမကြာသေးမီလေ့လာမှုများနှင့်အညီအကြီးအကျယ်ဖြစ်ကြ (Beltzer နှင့် Bajos, 2008; ။ Beltzer et al, 2010; ESCAPAD, 2011; Beck et al, 2013 ။ ) ။
ဒီဧရိယာ၌ပြုသောအမှုအားလုံးသည်အလုပ်တကယ်တော့ကြောင်းညစ်ညမ်းနိဂုံးချုပ်အတွက်တညီတညွတ်တည်းဖြစ်ပါသည်လူငယ်များအပေါ်တစ်ဦးနေရာအနှံ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်နှင့်ယောက်ျား Bajos နှင့် Bozon, 2008 အနေနဲ့အစောပိုင်းကအသက်အရွယ်မှာလောင်နှင့်ပိုပြီးမကြာခဏအမျိုးသမီးတွေထက် (မူထသော, Bajos et al, 2008 ။ ဘရောင်းနှင့်သည် L'Engle, 2009; Haggstrom-Nordin, 2005; Wallmyr နှင့် Welin, 2006; Ybarra နှင့်မစ်ချယ်, 2005; Haldet အယ်လ်, 2013; ။ မော်ဂန်, 2011) ။
ဤသည်ကိုလည်း Research Institute (IFOP, 2009, 2013) ကပြုစစ်တမ်းများကအတည်ပြုသည်။
Young ကညစ်ညမ်း၏စားသုံးသူများ, အလုံးစုံ, ပိုမိုမိတ်ဖက် (Braun-Courville နှင့် Rojas, 2009; မော်ဂန်, 2011; Kraus နှင့်စယ်, 2008) ရှိသည်။ တစ်ဦးအစောပိုင်းကအသက် (Odeyemi et al မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကို, 2009; မော်ဂန်, 2011; Kraus နှင့် စယ်, 2008), ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်, စအိုထိုးဖောက်မှု (Haggstrom-Nordin, 2005 ၏အထူးပိုပြီးမကြာခဏအလေ့အကျင့်အားဖြင့်၎င်း, ဘရောင်းနှင့်သည် L'Engle, 2009; Braun-Courville နှင့် Rojas, 2009) ။
ဒါတွေကိုတစ်ဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်လိင်အသက်တာ၏ဦးတည်ချက်အတွက်ဦးတည်ရမည့်ပုံရသည်။ တကယ်တော့, 800 ကျောင်းသားတစ်ဦးအမေရိကန်လေ့လာမှု IPNs တို့၏စားသုံးမှုမြင့်မားအကြိမ်ရေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု (မော်ဂန်, 2011) ၏အနိမ့်အဆင့်ကိုသူနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းပြသထားတယ်။
အခြားအမေရိကန်အလုပ်များတွင်လေ့လာမှုမြီးကောင်ပေါက်များ၏ထိတွေ့မှုများ၏အချိန်မတန်မီအသက်အရွယ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ယောက်ျားလေးများအတွက်, ထိုကဲ့သို့သောအချိန်မတန်မီအသက်အရွယ်မှာထိတွေ့ခံရခြင်းကိုပိုမိုအလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်စအိုနှင့်ပါးစပ်လိင်များ၏အလေ့အကျင့်တစ်ခုတိုးစေပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေအတွက်ကဆန့်ကျင်ပေါ်, သူတို့ကိုလျော့နည်းအလိုလို (Brownand L ကို '' Engle, 2009) အောင်နေဖြင့်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မယ်။
ဤသည်မှာစစ်တမ်းညစ်ညမ်း၏စားသုံးမှုနှင့်အချို့သောအန္တရာယ်အပြုအမူအကြားသိသိသာသာ link ကိုတည်ထောင်ရန်ပုံရသည်, ဒါပေမယ့်အကြောင်းနှင့်အကျိုးအကြားကဒီလင့်ခ်၏ညှနျကွားနှင့်သဘောသဘာဝကိုသတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်မဟုတ်။ အများအပြားအကျင့်ကိုကျင့်ဒီ link ကိုအတည်ပြုပါ။ တစ်ဦးက 2005 အမေရိကန်လေ့လာမှုညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုသူကိုမြီးကောင်ပေါက်လိုလိုလားလားပိုပြီးဆိုးသွမ်းအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနှင့်ပိုပြီး psychoactive တ္ထုများ (Ybarra နှင့်မစ်ချယ်, 2005) လောင်ကြောင်းပြသထားတယ်။
2011 ခုနှစ်တွင်ဆွီဒင်လေ့လာမှုလည်းငယ်ရွယ်အထီးလူကြီးများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းများ၏မကြာခဏစားသုံးမှုအရက်၏တစ်ဦးထက်ပိုမကြာခဏစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသ (Svedin et al ။ , 2011) ။
ညစ်ညမ်းပုံမှန်စားသုံးသူကိုပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက် (; မော်ဂန်, 2009; Kraus နှင့်စယ်, 2011 Braun-Courville နှင့် Rojas, 2008) ရှိသည်။
သို့သော်ဤကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်အက်စ်တီအိုင်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ သာ. ကြီးမြတ်ပြန်လည်ကုသဖြင့်လိုက်ဖက်မပေးပါ။ ထို့ကြောင့်ညစ်ညမ်း၏စားသုံးမှုနှင့်အန္တရာယ်များ၏ဆည်းပူးနေအကြားအသင်းအဖွဲ့ကအက်စ်တီအိုင်မှကြွလာသောအခါမှာအနည်းဆုံးအဖြစ်ဝေးယောက်ျားသက်ဆိုင်ရာနေကြသည်အဖြစ်, (Tydénနှင့် Rogala, 2004; Luder et al, 2011 ။ ) သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေ (ပေတရုနှင့် Valkenburg, 2011) မှကြွလာသောအခါဤသည်အငြင်းပွားနေသည်။
ကွန်ဒုံးမှကုစားဆိုတဲ့အချက်ကိုကဤကိစ္စများတွင်လျော့နည်းမကြာခဏဖြစ်ပါတယ်ပေးထားသောအထက်ပါညွှန်ပြသည့်အတိုင်း, စအိုလိင်ဆက်ဆံနှငျ့ပတျသကျသောလိင်အန္တရာယ်အပြုအမူဖြစ်စဉ်းစားနိုင်ပါသည်။ 18 နှစ်အရွယ်မြီးကောင်ပေါက်အပေါ်ပြုမိတစ်ဦးကဆွီဒင်လေ့လာမှု '' ကြီးမားတဲ့စားသုံးသူ '' ညစ်ညမ်း၏စအိုလိင်ဆက်ဆံပါဝင်သောပိုပြီးဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ကြပြီးဒီထက်ကောင်းကောင်းကာကွယ်ထားကြသည်ဟူသောအချက်ကို (သာ 39% ကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြု) (Haggstrom-Nordin, 2005 မီးမောင်းထိုးပြ ) ။